प्रेमसम्बन्ध सुरु भएको कतिपछि शारीरिक सम्बन्ध उचित ? यसो भन्छ अध्ययन | Rajmarga
प्रेमसम्बन्ध सुरु भएको कतिपछि शारीरिक सम्बन्ध उचित ? यसो भन्छ अध्ययन
प्रेम र यौनका विषयमा मानिसहरुबीच फरक फरक धारणा छन् । कतिपय प्रेम र यौनलाई जोडेर हेर्छन् भने कतिपयले यसलाई एउटै सिक्काका दुई पाटाका रुपमा अर्थ्याउँछन् तर पछिल्लो समयमा यी दुवै विषयमा खुला बहस हुन थालेका छन्।
नेपालमा यस्ता बहस चलिरहँदा विश्वमा भने पहिलो मुलुक भनिने देशमा भने लभ पार्टनर भएको कति समयपछि यौन सम्पर्क गर्नु उचित हुन्छ भन्ने अध्ययन तथा बहस सुरु भएको छ।
स्वास्थ्यसम्बन्धी सल्लाह तथा जानकारी दिने डाक्टरइडी डट कम अनलाइनले हालसालै प्रेम जोडीको पहिलो यौनसम्पर्कका बारेमा गरेको अध्ययनको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। उक्त अनलइनले प्रेम जोडी भएको कति पछि शारीरिक सम्बन्ध राख्नु उपयुक्त हुन्छ भन्ने विषयमा अध्ययन गरेको थियो । यस्तो अध्ययन विश्वमै पहिलोपटक भएको दावीसमेत गरिएको छ।
सबैमा कौतुहलता हुन्छ–प्रेम बसेको कति समयपछि यौनसम्पर्क गर्नु उपयुक्त होला त ? प्रेमिल जोडीले शारीरिक निकटताका लागि कति दिनसम्म पर्खनु उपयुक्त होला ? हुन त प्रेम जोडीमध्ये कुनै एकले यौनसम्पर्कका लागि हतार गरे अर्को पार्टनरले उसको मानसिकता नै विकृत छ भन्ने पनि सोच्न सक्छन् । यदि त्यसो हो भने लामो समय चुप लागेर बस्दा पनि अत्याधिक लजालु भएको शंका गरिन्छ । त्यसैले मायामा रहेको जोडीले पहिलोपटक कस्तो बेला यौनसम्पर्क गर्ने ? डीआइडी डट कमका अनुसन्धानकर्ताहरुले यही प्रश्नजलाई आफ्नो अध्ययनको विषय बनाएका थिए ।
सर्भेमा भाग लिने ५० प्रतिशत युगल जोडीले पहिलोपटक शारीरिक सम्पर्कका लागि नजिकिन एक हप्तादेखि एक महिनासम्म लागेको बताए । उक्त अध्ययनका लागि १ हजार अमेरिकी तथा युरोपेली प्रेमिल जोडीको सहयोग लिइएको थियो भने अध्ययनमा संलग्न २१ प्रतिशत जोडीले आफ्नो पार्टनरसँग पहिलोपटक यौन सम्पर्क राख्न २ देखि ६ महिनासम्म पर्खिएको बताएका थिए ।
सर्भेमा संलग्न विशेषज्ञहरुले यो अध्ययनका क्रममा एउटा रमाइलो तथ्य पनि फेला पारे । त्यो तथ्य के हो भने यौनसम्पर्कका लागि कुरेर बस्नेहरु बढी तनावमा हुन्छन् । जुन कुरा सही लाग्छ त्यो र्ओका लाग गलत पनि लाग्न सक्छ भन्ने उनीहरुको ठम्याई छ ।
सर्भेको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पाटो प्रेमिल जोडीका लागि पहिलो यौनसम्पर्क गर्ने उपयुक्त समय चिश्चित हुन्छ कि हुँदैन भन्ने थियो । यो अध्ययनमा संलग्न विज्ञहरुले के निष्कर्ष निकालेका छन् भने यौनसम्पर्कको पूर्ण अधिकार प्रेममा परेका जोडीमै निर्भर रहन्छ । हुन सक्छ कतिपय मानिसले शारीरिक सम्बन्ध राख्नुअघि केही समय लिएर एकअर्कालाई बुझ्ने प्रयास गर्छन। कोही भने अन्य कुरा विचार नै नगरी शारीरिक सम्बन्धलाई उच्च महत्व दिने स्वभावका हुन्छन् ।
गत वर्ष भएो यौनसम्बन्धी अर्को एउटा अध्ययनमा पनि केही रोचक तथ्य फेला परेको थियो । उक्त अध्ययनले विवाहअघि दुई वा दुईभन्दा बढीसँग यौन सम्बन्ध कायम गरेकाहरुको विवाहपछिको सम्बन्ध दह्रो भएको थियो । पारिवारिक अध्ययनसम्बन्धी एउटा अमेरिकी संस्थाको उक्त अध्ययन प्रतिवेदन गत मार्चमा सार्वजनिक भएको हो ।
अध्ययनमा विवाह अघि नै यौनसम्पर्कको अनुभव बटुलेकाहरुको संख्या उच्च रहेको पाइएको थियो । उक्त अध्ययनले अमेरिकामा विवाह अघि एक जना मात्र यौन साथी भएका महिलाको संख्यामा कमी आइरहेको कुरासमेत देखाएको थियो । एजेन्सी
Previous post: भ्यालेन्टाइन डेमा यौनमा सतर्कता
Next post: एमाले प्रदेश नं ३ को दलको नेतामा पौडेल विजयी